तरकारीजन्य खाद्यमा ध्यान नदिदा नाम्लेकिराले ज्यान लिन सक्छ
Home जीवनशैली तरकारीजन्य खाद्यमा ध्यान नदिदा नाम्लेकिराले ज्यान लिन सक्छ
एजेन्सी – छोरीले हरेक दिन जस्तो टाउको दुख्यो भनेर गुनासो गर्न थालेपछि आमा बुबालाई यसबारेमा बुझ्न धेरै मुस्किल भइरहेको थियो । आखिर किन उनीहरूको छोरी टाउको दुख्यो भन्छिन् भनेर कुनै भेउ नै पाउन सकेनन् ।
सानी बच्चीको दिमागमा १०० भन्दा धेरै टेपवर्म (नाम्लेकिरा) अर्थात फित्तेकीराको अण्डा थियो जुन मस्तिस्कमा ससाना क्लटका रुपमा देखिएका थिए । अहिले ती बच्चीको उपचार भारतको एक अस्पतालमा न्यूरोलोजी डिपार्टमेन्टका चिकित्सकहरूको रेखदेखमा चलिरहेको छ । चिकित्सकहरूका अनुसार कुनै पनि चीज राम्रोसँग नपकाई खाएमा र सरसफाइमा त्यति ध्यान दिइएन भने टेपवर्म पेटमा पुग्छ । त्यसपछि रक्त प्रवाहसँगै टेपवर्म शरीरको अलगअलग भागमा जान्छ ।
के हो टेपवर्म (नाम्लेकिरा) ?
गाँउघरमा फितेकिरा भनिने टेपवर्म (नाम्लेकिरा) एक परजिवी हो । यो आफ्नो पोषणको लागि अरुमा आश्रति हुने जीव हो । मानिसको शरीरमा पसेपछि खाना नियमित पाउने हुनाले यो धेरै समयसम्म बाँच्न सक्छ ।
कसरी फैलन्छ टेपवर्म (नाम्लेकिरा) ?
टेपवर्म (नाम्लेकिरा)को संरचना रिबनजस्तो चेप्टो हुन्छ । फित्तेकीराको अण्डा शरीरमा प्रवेश गर्‍यो भने यसले आन्द्रामा आफ्नो घर बनाउँछ । तर, यो पुरै जीवनकाल आन्द्रामा नै बस्छ भन्ने हुँदैन । रगतसँगै यो शरीरका अन्य भागमा समेत पस्छ ।
टेपवर्म (नाम्लेकिरा) कसरी मानिसको शरीरमा पुग्छ ?
आधा पाकेको वा काँचो सुँगुर वा बीफ खाँदा यो मानिसको शरीरमा पुग्छ । त्यस्तै आधा पाकेको वा काँचो माछाको सेवन गर्दा समेत यो मानिसको शरीरमा प्रवेश गर्ने सम्भावना हुन्छ । । वास्तवमा यी जीवहरूमा टेपवर्मको (नाम्लेकिरा) लार्भा हुन्छ । फलतः माछा मासु राम्रोसँग पकाएर खाइएन भने टेपवर्म शरीरमा पुग्छ ।
बन्दागोभी, पालक जस्ता हरियो सब्जीलाई राम्रोसँग पकाएर खाइएन भने पनि टेपवर्म (नाम्लेकिरा) शरीरमा पुग्नसक्छ ।
-टेपवर्म (नाम्लेकिरा) संक्रमणको लक्षण
शरीरमा टेपवर्म (नाम्लेकिरा)को सङ्ख्या वा अण्डाको सङ्ख्या धेरै छ भने चक्कर आउने, छाला पहेँलो हुने, खोकी लाग्ने, सास फुल्ने, आँखाले हेर्न गाह्रो हुनेजस्ता समस्या समेत देखिन सक्छन् ।
टेपवर्म (नाम्लेकिरा) एकपटक मानिसको शरीरमा पुग्यो भने यसको औषधिको सेवनबाट नै छुटकारा पाउन सकिन्छ । तर, केही सावधानी अपनाउने हो भने यसको संक्रमणबाटै जोगिन सकिन्छ ।
Previous articleगर्मीमा यी तरकरीले फाइदा पुर्याउँछ
Next articleराम्रो वर्षापछि महोत्तरीमा धमाधम रोपाइँ